I-Gawthorne's Hut-EYONA NTO YOKUHLALA ENGEYONA NTO YOKUHLALA - Airbnb ngo-2021
I-Gawthorne's Hut bubunewunewu, umyili oyilwe, ngaphandle kwegridi ye-Eco hut isenzela izibini kuphela. Yeyona ndawo intsha yokusinda eWilgowrah yelizwe. Yakhelwe ukubamba iimbono ezintle ibonelela iindwendwe ngoxolo, ubumfihlo kunye nemvakalelo yokuzahlula. Ukubandakanywa-Ibhedi enkulu, ibhafu epheleleyo, ishawa, indlu yangasese egungxulwayo kunye nekhitshi. IHut kaGawthorne ngoku inexesha lemini lokupholisa umoya. "IWilgowrah" yipropathi eyimbali kunye nebukekayo yasemaphandleni eyaziwa ngokubaleka kwayo okokuqala-iTom's Cottage.
Indawo ishushu kwaye iyamema ngamaplanga endalo asetyenziswa kakhulu kulo lonke. Iifestile ezinkulu kunye neengcango zibamba iimbono zentlambo ye-Mudgee enhle kunye nendalo engqongileyo. IGawthorne's yeyona ndawo yokubalekela yothando.
I-Gawthorne's Hut imalunga neekhilomitha ezi-2 ukusuka kwikhaya lethu kwaye ibekwe ngasemva kwipropathi yase-"Wilgowrah" enesango layo labucala lokungena e-Edgell Lane. Mhlawumbi awuzukusibona kwaphela ngaphandle kokuba ufuna ukubulisa nangona kunjalo sifowuna nje ukuba ufuna uncedo.
I-Gawthorne's Hut imalunga neekhilomitha ezi-2 ukusuka kwikhaya lethu kwaye ibekwe ngasemva kwipropathi yase-"Wilgowrah" enesango layo labucala lokungena e-Edgell Lane. Mhlawumbi a…